उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन स्थगित | Kendrabindu Nepal Online News
30604776 954140 7393728 22256908
61593 390 17383 43820
उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन स्थगित
६ चैत्र २०७६, बिहीबार १५:३८
काठमाडौँ । कोरोना भाइरसका कारण उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन पर धकेलिएको छ ।
महासंघमा आज बसेको बैंठकले आगामी जेठसम्मका लागि निर्वाचन स्थगित गरेको हो । कोरोनाको त्रास फैलिएदेखि नै सरकारले ठूला ठूला कार्यक्रमहरु स्थगित गर्दै आएको छ । बुधबार मात्रै सरकारले एसईई लगायत त्रिभुवन विश्व विद्यालयले लिने सम्पूर्ण परीक्षाहरू पनि स्थगित गरेको छ । त्यसका साथै २५ जना भन्दा बढी एकै स्थानमा भेला हुन नपाइने निर्णय गरे लगत्तै महासंघले बैठक डाकेको थियो । सो बैंठकमा एक महिना चुनाव सार्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
बरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि व्यवसायी चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधानले आफ्नै प्यानल लिएर चुनावी मैदानमा जाँदैछन् । यहि चैत्र २८ र २९ गते तय भएको महासंघको चुनावमा व्यवसायी ढकालले देशव्यापी रुपमा गरेको तयारीका बेला उनलाई साथ दिने कयौँ उद्योगी व्यवसायीहरु छन् ।
व्यवसायीका सानातिना समस्याहरु पनि सुल्झाउन संँधै तयार रहने ढकाल उद्योगीहरुको विचमा विश्वस्वस्नीय व्यक्तिको रुपमा मानिन्छन् । साना तथा मझौला व्यवसायी मिलाउन खप्पिस ढकालको यसपाली संभावना राम्रो देखिन्छ । महासंघको विधान अनुसार वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा स्वतः अध्यक्ष हुने भएपछि व्यवसायी ढकालले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उमेद्वारी घोषणा गरेका थिए ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचन जित्ने उम्मेदवार अर्को कार्यकालका लागि स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था महासंघ विधानमा छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षसँगै साधारणसभामा तीन उपाध्यक्ष (जिल्लारनगर, एशोसिएट र वस्तुगत) र कार्यसमिति सदस्यमा पनि निर्वाचन हुनेछ । गत अधिवेशनमा चन्द्र ढकाल एशोसिएटबाट उपाध्यक्ष चयन भएका थिए । ढकालको पक्षमा पूर्वअध्यक्ष सुरज वैद्य तथा चण्डीराज ढकाल उभिएका छन् । शक्तिशाली पूर्व अध्यक्षहरु ढकालको पक्षमा उभिएपछि उनको संभावना बलियो भएको बताइन्छ ।
बरिष्ठ उपाध्यक्षमा ढकालसहित किशोरकुमार प्रधान (जिल्ला र नगर) ले पनि उमेद्वारी दिएका छन् । यी दुई उपाध्यक्षले आ–आफ्नो प्यानल बनाएर तीब्ररुपमा चुनाव प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । प्रधान र ढकालबीचको प्रतिस्पर्धा निकै रोचक हुने गर्छ ।
त्यस्तै, रविभक्त श्रेष्ठसहित महासंघका पूर्वअध्यक्षहरूले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा पनि सहमतिको पहल भइरहेको छ । उपाध्यक्ष ढकाल र प्रधानले आफुहरु हदैसम्म सहमतिमा आउने बताएका छन् । महासंघको नेतृत्व गर्न प्रधानलाई वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले साथ दिने भएका छ । प्रधान यसअघिको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उनै गोल्छासँग पराजित भएका थिए ।
यतिबेला मुलुक चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित बनेको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु रोक्नुका साथै तय भएका ठूला कार्यक्रमहरु पनि धमाधम स्थगित गरिरहेको छ । जसको प्रभाव महासंघलाई पनि परेको छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ
Prev‘भारतीय सीमाबाट कोरोनाको जोखिम उच्च’ : गृह मन्त्रालय
लोकसेवा आयोगको परीक्षा तत्कालका लागि स्थगितNext
उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन : यस्ता छन् प्रस्तावित मोडालिटी
उद्योग वाणिज्य महासंघको विवाद समाधानका समिति गठन
उद्योग वाणिज्य महासंघ केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक साउन २१ गते
उद्योग वाणिज्य महासंघको महाभिडन्त : ढकाल कि प्रधान ? (भिडियोसहित)
‘फोटो झुण्ड्याउन मात्र महासंघको नेतृत्वमा आएको होइन’ : शेखर गोल्छा (भिडियोसहित)
उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि चन्द्र ढकालद्वारा उम्मेदवारी घोषणा (भिडियोसहित)
अनलाइनबाटै व्यक्तिगत घटना दर्ता
संविधान दिवसमा प्रधानमन्त्रीले विशेष सम्बोधन गर्ने
सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमितकाे संख्या साढे ६ हजारभन्दा बढी
जबरजस्ती चन्दा संकलन गर्ने दुई जना पक्राउ
२८९ कैदीबन्दीलाई कैद मिनाहा
'भारतसँग छिट्टै वार्ता हुन्छ' : परराष्ट्रमन्त्री
जनकपुरमा नेपाली रेलदेखि आवश्यक भए संविधान संशोधन हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइसम्म (भिडियोसहित)
रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन
मुलुकभर २४० प्रतिशत बढी वर्षा, कुन जिल्लामा कति क्षति ?
बाढी पहिरोको जोखिम रहेका बस्तीलाई छ महिनाभित्र सुरक्षित स्थानमा सार्न समितिको निर्देशन
केन्द्रबिन्दु डट कम र केन्द्रबिन्दु न्यूज (युट्युब मार्फत) केन्द्रबिन्दु अनलाइन मिडिया प्रा.लि.ले सञ्चालन गर्ने नेपाली भाषाका समाचार पोर्टल हुन् । समाचार र विचारको चुरो कुरो पस्कने हाम्रो पहिलो लक्ष्य हो ।
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं:- १११२ / २०७५–७६
सुझाव / गुनासो
हनुमानस्थान, अनामनगर, काठमाडौँ, नेपाल